Madaxweyne kuxigeenka Puntland oo gaaray Magaalada Qardho – Banaadir Times
By banaadir 16th May 2021 52 No comment
Madaxweyne ku xigeenka dowlad Gobleedka Puntland ahna ku simaha madaxweynaha Axmed Cilmi Cismaan (Axmed Karaash), iyo wafdi uu hoggaminayo ayaa Maanta waxaa ay gaareen Magaalada Qardho ee xarunta Gobolka Karkaar.
Magalada Qardho ayaa waxaa Madaxweyne ku xigeenka Puntland ku soo dhoweeyay mas’uuliyiin isugu jira, Wasiiro, Xildhibaanno, Saraakiil madaxtooyo, maamulka Gobolka Karkaar iyo kan degmada Qardho & qeybaha kala duwan ee Bulshada Magaalada.
Ujeedada safarka Madaxweyne kuxigeenka Puntland uu u tegay magaalada Qardho ayaa waxaa lagu sheegay in uu halkaasi kaga qyeb geli doono munaasabadda daah-furka barnaamijka diiwaan-gelinta codbixiyaasha saddexda degmo ee Qardho, Eyl iyo Ufayn, kuwaas oo dhowaan laga qaban doono.
Sidoo kale Madaxweyne ku xigeenka dowlad Gobleedka Puntland ahna ku simaha madaxweynaha Axmed Cilmi Cismaan (Axmed Karaash) ayaa waxaa uu kulamo kala duwan la qaadan doonaa Mamulka degmada Qardho iyo qeybaha kala duwan ee Bulshada Magaalada.
Maamulka Hir-Shabeelle oo ku dhawaaqay in Go’doon gashay Magaalada Jowhar
DEG-DEG: Dagaal ka bilowday Degmada Balad Xaawo.
Guddiga lagu muransan yahay ee doorashooyinka oo ku baaqay shir deg deg ah
Guddiga la magacaabay intooda badan waxay ka tirsan yihiin Xafiiska RW Kheyre (Xildhibaan Axmed Fiqi)
By banaadir 18th July 2019